Soomaaliya oo jawaab ka bixisay go’aankii Kenya - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Soomaaliya oo jawaab ka bixisay go’aankii Kenya
Soomaaliya oo jawaab ka bixisay go’aankii Kenya
Muqdisho (Allbanaadir Media) – Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cismaan Abuukar Dubbe oo la hadlay BBC-da ayaa jawaab ka bixiyey go’aanka kasoo baxay Kenya ay ee ku xireyso xeryaha Dhadhaab & Kaakuma.
Dubbe ayaa marka hore shaaca ka qaaday in Kenya ayna xeri karin labadaasi xero ayna qasab kusoo celin karin qaxootiga Soomaaliya oo uu tilmaamay inay ku joogaan sharci caalami ah.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Kenya ay siyaasadeyneyso arrimaha qaxootiga, islamarkaana ay wado argoosi, sida uu hadalka u dhigay.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in Kenya dan badan ugu jirto qaxootiga deggan dalkeeda, islamarkaana ay ku hesho dhaqaale xoog leh.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya, iyada oo Kenya ay shaacisay in labo todobaad kaddib ay albaabda isugu dhufan doonto xeryaha qaxootiga ee Dhahdhaab & Kaakuma ee dalkaasi.